Mirgi wabii obbo Baqqalaa Garbaa dhorkame- BBC AFAAN OROMOO – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsMirgi wabii obbo Baqqalaa Garbaa dhorkame- BBC AFAAN OROMOO
Manni Murtii Waliigalaa Federaalaa dhaddachi afraffaa, gaafa Onkoloolessa 30, mirgi wabii dura taa’aa itti aanaa Kongirasii Federaalistii Oromoo obbo Baqqalaa Garbaa eegamee dhimma isaanii akka alaa hordofan murteessee ture.
(bbcnewsafaanoromoo)– Dhaddachi ijibbaata mana murticha ‘dogoggorri bu’uura seeraa’ jira jechuun mirga wabii kennee ture dhorkuu isaa abukaatoon obbo Baqqalaa, Obbo Abduljabbaar Huseen nutti himaniiru.
Dhaddachi ijibbaataa dogoggorri bu’uura seeraa jira gaafa jedhame, mirga wabii kenname dhorkuu danda’a kan jedhan obbo Abuljabbaar Huseen, ‘dogoggora bu’uura seeraa’ jedhame ammaaf isaanis ta’e maamilli isaanii obbo Baqqalaan argachuu akka hin dandeenye nutti himan.
Qabxiileen obbo Baqqalaan akka mirga wabii hin arganne irratti dhiyaatan lama: Gara biyya alaa bahuu danda’a kan jedhuu fi yoo mana hidhaatii bahe namoota hedduu kakaasuu danda’a kan jedhan yoo ta’an, kunneen ammoo akka ijoo dubbii seeraatti waan ilaalaman miti jedhu.
“Waanta jiru iyyatni isaanii wayita nu qaqqabu ni ilaalla, waa akka jiru shakkii qabna,” jedhu obbo Abduljabbaar.
Obbo Baqqalaan qarshii kuma 30’n, mirga wabiif akka qabsiisan mana murtiin wiixata darbe ajajaman maatiin isaanii qabsiisaniis bulchiinsi mana sirreessaa qilinxoo dogoggorri lakkofsa galmee jira jechuun obbo Baqqalaa osoo gadi hin lakkisiin tureera.
Wiixata darbe wayita mirgi wabii isaanii eegamee akka bahan murtaa’e, maatiin isaanii qarshii barbaachisuu qopheessaa akka turaniifi ”yoo haalli addaa hin jiraatiin har’uma sa’aatii booda bahuu danda’u,” jechuun obbo Abduljabbaar BBC’tti himanii turan.
Obbo Baqqalaa Garbaa Mudde bara 2015 ture kan to’annaa jala oolan. Jalqaba irratti himannaa shororkeessummaan kan himataman yoo ta’u Adoolessa darbe manni murtii olaanaa Federaalaa himannaa isaanii shororkeessummaa irraa gara himannaa yakkaatti gadi buusuun isaa ni yaadatama.
Sanaan dura bara 2011 hidhaan waggoota saddeetii itti murtaa’ee, hidhaa isaanii xumuranii mana hidhaa bahuun isaanii ni yaadatama.